>Cartoon Maung Yit – Human Rights Day – 60 Years
> Cartoon Maung Yit – The World is celebrating 60 year of human rights day and still Burmese are suffering 60 years of imprisonments for human rightsDecember 7th , 2008 No tags for this post. Related posts No related posts.
>Anaun cartoon – 01
> ကာတွန်း – အနောင်ချယ်ရီမဂ္ဂဇင်း၊ ၁၉၈၇ ဖေဖော်ဝါရီ No tags for this post. Related posts No related posts.
> နိုင်ငံရေးနဲ့ စာပေအနုပညာ (၁၇)ဆရာဇော်ဂျီ၏ ကဗျာ ၂ ပုဒ်ထိန်လင်းဒီဇင်ဘာ ၇၊ ၂၀၀၈ မြန်မာပြည်ရဲ့ နိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာ စာပေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍက အရေးပါခဲ့သလို စာပေပညာရှင်တွေရဲ့ စာပေနဲ့ နိုင်ငံရေးဖြတ်သန်းမှုတွေကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ အမျိုးသားစာဆို၊ ပြည်သူ့စာဆိုအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းခံရတဲ့ စာပေပညာရှင်တွေကတော့ တိုင်းပြည်နဲ့လူထုအတွက် စာပေတာဝန် အမျိုးသားတာဝန် ကျေသူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို တာဝန်ကျေကြတဲ့ စာပေပညာရှင်တွေထဲမှာ ဆရာဇော်ဂျီလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ ၁၉၂ဝ ပထမ ကျောင်းသားသပိတ် ပေါ်ပေါက်တဲ့အချိန်မှာ ဆရာဇော်ဂျီက ခုနစ်တန်းကျောင်းသားပဲ ရှိပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆရာနေထိုင်ရာ ဖျာပုံမြို့မှာ သပိတ်မှောက်တော့ အဲဒီသပိတ်ထဲ ဆရာလည်း ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလို ငယ်ငယ်ကတည်းက အမျိုးသားစိတ်ဓာတ် ကိန်းအောင်းခဲ့တဲ့ဆရာဟာ လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲမှာ ကလောင်နဲ့ တာဝန်ထမ်းခဲ့ပါတယ်။ ဆရာ့ရဲ့ ကဗျာတွေမှာ...
> မိတ်ဆွေများထံမှ ပေးအပ်လိုက်သောအရာ စိုးသင့်ဆွေဒီဇင်ဘာ ၇၊ ၂၀၀၈ မိတ်ဆွေကောင်းဆိုတာ လောကမှာ တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ အရာပါ တဲ့။ ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ သတ္တဝါများဟာ ရေသတ္တဝါတွေဖြစ်ဖြစ်၊ ကုန်းနေသတ္တဝါတွေပဲ ဖြစ်ဖြစ် မျိုးတူရာ စုပေါင်း နေထိုင်တဲ့ စရိုက်သဘာဝ ရှိကြတယ် မဟုတ်လား။ ကျမတို့တွေဟာ လူ့ဘဝသက်တမ်း တလျှောက်လုံး မိမိရဲ့ ရောက်ရှိနေတဲ့အသက်ထက် များပြားတဲ့ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းတွေ ရရှိခဲ့တယ် မဟုတ်ပါလား။ လူဆိုတာ တဦးတည်း အထီးကျန် မနေတတ်တဲ့ သတ္တဝါထဲမှာ ထိပ်ဆုံးက ပါတယ်လေ။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရှိတဲ့ လူသားတိုင်းဟာ မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်းကို လိုလားကြပါတယ်။ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းဖြစ်အောင် တဦးနှင့်တဦး မိတ်ဖွဲ့ကြ၊ ခင်မင်ရင်းနှီးမှုကို တည်ဆောက်ကြပါတယ်။ မိတ်ဆွေ နှစ်ယောက်ရဲ့ ခင်မင်ရင်းနှီးမှု...
> အသံဖိုင် ၁ (audio file – 1)အသံဖိုင် ၂ (audio file – 2) ပြောပြစရာတွေလည်း တပုံကြီးရှိသေးတယ် (၂၅၆)လက်ရေတပြင်တည်းမာမာအေးဒီဇင်ဘာ ၇၊ ၂၀၀၈ သောတရှင်များ ကျန်းမာတော်မူကြပါစရှင်- မာအေးချစ်တဲ့ သောတရှင်တွေ ဂီတ၀ါသနာရှင်တွေအားလုံး မာအေးရဲ့ အသံလေး ကြားရတဲ့အခါမှာ ကိုယ်ရောစိတ်ပါ ချမ်းသာကြပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းလိုက်ပါတယ်။ သောတရှင်တို့ရေ လွန်ခဲ့တပတ်နှစ်ပတ်လောက်တုန်းက မာအေးရဲ့ ရောင်းရင်းကြီး ကိုဝင်းဖေတယောက် သူဌေးကြီးဆိုရပ်ရဲ့ မွေးနေ့ပွဲမှာ စပြီးတော့ အဆိုတော် လုပ်လာတာတွေ့မိတယ်လို့ မြန်မာ ပညာရပ်ဝန်းများဆွေးနွေးပွဲက ကိစ္စတွေ ဖောက်သည်ချရင်း ပြောမိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ စနေညက မြန်မာအကနဲ့ မြန်မာ ဂီတကို မြန်မာဖြစ် ဆိုင်းဝိုင်းကြီးနဲ့ တင်ဆက်ကြရမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အဆိုတလှည့်၊...
>maung gyi pyi soe – short story 01
> အရှေ့ယွန်းက နေ၀န်းရှိရာ မောင်ကြီးပြည်စိုး ဒီဇင်ဘာ ၆၊ ၂၀၀၈ ၁။ငါးမိနစ်အလွန်။လက်ကနာရီကိုငုံ့ကြည့်လိုက်သည်။ ငါးမိနစ်လွန်သွားပြီ။ ငါးနာရီငါးမိနစ်လွန်သွားပြီ။ မသေချာ။ သေ ချာအောင် တခါထပ်ကြည့်သည်။ ငါးမိနစ်လွန်သွားပြီမှာ သေချာပြီ။ ဒီငါးမိနစ်အတွင်း ဒါမှမဟုတ် ငါးနာရီထိုးပြီးချိန်ကစပြီး နာရီကိုဘယ်နှကြိမ်ဘယ်နှခါကြည့်မိမှန်း မသိကြည့်မိသည်။ ကြည့်စရာကလည်း လောကတခုလုံး ဟောဒိ့ ကျပ်စေ့အ၀န်းသာသာ နာရီမျက်နှာပြင်လေးကလွဲလို့ ဘာမှ မရှိတော့သလို။ တကယ်ဆို ကားထွက်ရမည့်အချိန်က လွန်နေပြီ။ မောင်းလိုက်ပါတော့လား။ ငါးနာရီတိတိတုန်းကတော့ ဂိတ်မှူးက အချက်ပေးခရာ မှုတ်လိုက်သေးသည်။ ခရီးသည်အပြည့်တင်ထားပြီး ဖြစ်သည့် အဝေးပြေးဘတ်စ်ကားကလည်း ခရီးတာတခု စတင်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း အတိအလင်း အသိပေး ကြေညာလိုက်သလို ဟွန်း သံရှည်ရှည် ပေးပြီးခဲ့ပြီ။ ခုနေဆို ကားက ခရေပင်လမ်းခွဲလောက်ပင် ရောက်နေရော့မည်။ ခုတော့ ကားက မူလနေရာမှ...
>Maimi – 01
> အမှတ်တရ မိုင်ယာမီ (၁)ဉာဏ်ဦးမောင်ဒီဇင်ဘာ ၆၊ ၂၀၀၈ မိုင်ယာမီ – တဲ့။ ဒီနာမည်လေးကို ငယ်ငယ်ကတည်းက ရင်းနှီးနေခဲ့တာ။ သစ်တောတွေ၊ မြစ်ချောင်းတွေကို ခင်တွယ်တတ်။ ကောင်းကင်၊ ပင်လယ်နဲ့သမုဒ္ဒရာတွေကို ချစ်တတ်တဲ့ သူတစ်ယောက်အဖို့ ကမ္ဘာကျော် မိုင်ယာမီဆိုတဲ့ အထင်ကရ လှပတဲ့ကမ်းခြေနာမည်လေးနဲ့ ခုလိုရင်းနှီးနေခဲ့တာ အဆန်းတော့လည်း ဘယ်ဟုတ်ပါ့မလဲ။ ဒီနေရာမျိုးလေးဆီကို အရောက်သွားချင်နေမိခဲ့တာလည်း ဘယ်မှာ ထူးတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါ့မလဲ။ ဒီတော့ မိုင်ယာမီက ကိုယ့်အိပ်မက်ထဲမှာ နေရာယူနေခဲ့တာ။ ကြာပေါ့။ အနှစ်နှစ် အလလကတည်းက မက်နေခဲ့တဲ့ ကိုယ့်အိပ်မက်။ ခုတော့လည်း မထင်မှတ်ဘဲ ပြည့်လာခဲ့ပြီ။ ကျေးဇူးပါ၊ ကျေးဇူးပါလို့ ကျေးဇူးတော်များ အခါတော်နေ့အကြို ကျေးဇူးစကား အခါခါ ဆိုချင်သပ။ ကိုယ်နေထိုင်ရာ ကာလီဖိုးနီးယားပြည်နယ် ဆန်ဖရန်စစ္စကိုလေဆိပ်ကနေ နိုဝင်ဘာလ...
>Hnin Khar Moe poem – 02
> ကလေးနှင်းခါးမိုး ဒီဇင်ဘာ ၆၊ ၂၀၀၈ ၁။ ဘာသာဗေဒနှစ်ခွန်းဟတတ်၊ အားရအောင်ငိုငိုတာစကား၊ ကလေးအားပဲ။ သေးပေါက်ချေးပါဘယ်နှစ်ခါဖြစ်ဖြစ်ချစ်တဲ့ အဖေ အမေနေအမှီရေကြည်နဲ့ ဖွပ်ခဲ့။ မျက်တောင်လျှော့စင်းသီချင်းပုခက်လက်အားသာသာ၊ လွှဲရကြာဒါ … ဘာလဲရင်ထဲက မေတ္တာ။ ကြင်နာသမှုအယုအယ၊ ဘ၀ပုံအပ်မြတ်နိုးချစ်စိတ်၊ အိပ်မက်ပုလဲရင်ထဲခွဲယူ၊ သူ …အဖြူရောင်လေးပါပဲ။ ၂။ မိဘမေတ္တာအာကာမြင်းမိုရ်၊ သိစေလို၍ပွေ့ဖက်ကြင်နာမင်္ဂလာယူနေခြင်းကား မဟုတ်။ လက်လှုပ်ခြေကန်ကလေးဟန်သံစဉ်မဲ့တေးသွားနှလုံးသားကို ကခုန်စေခဲ့တယ်။ အချစ်ရယ်နောက် အနှစ် နှစ်ဆယ်ကြာယင်ကမ္ဘာကြီးမှာ ကဗျာတပုဒ်လှုပ်ရှား အသက်လာဦးတော့မယ်။ No tags for this post. Related posts No related posts.
>Economists Appraise Bhutan’s Happiness Model
> ဘူတန်ကို ကော်ပီကူးပြီကျော်ကျော်ဒီဇင်ဘာ ၆၊ ၂၀၀၈ အခုလို ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးကပ် ဆိုက်နေချိန်မှာ စီးပွားရေးပညာရှင်များဟာ ဟိမ၀န္တာတောင်တန်းရဲ့ အရှေ့ဘက်မှာ တည်ရှိတဲ့ ဘူတန်(Bhutan)နိုင်ငံလေးကို ရောက်ရှိလာပါတယ်။ ဘူတန်နိုင်ငံရဲ့ ဂျီအန်အိပ်ခ်ျ(GNH – Gross National Happiness) လို့ ခေါ်တဲ့ စီးပွားရေးပေါ်လစီကို လေ့လာနေကြတာပါ။ ထူးခြားတာက ဂျီအမ်အိပ်ခ်ျဟာ ဗုဒ္ဓဘုရားရဲ့ တရားတော်အပေါ် အခြေခံထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဘူတန်က အုပ်ချုပ်သူများဟာ နိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို စီမံကိန်းဆွဲတဲ့အခါ သတ္တ၀ါအားလုံး၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်၊ အလုပ်၊ အိပ်စက်ခြင်း၊ စိတ်တည်ငြိမ်အောင် အားထုတ်မှု စတာတွေအားလုံးကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။ “စိတ်ပျော်ရွှင်မှုဟာ အလွန်အရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စ ဖြစ်ပါတယ်” လို့ ဘူတန် ၀န်ကြီးချုပ် Jigme Thinley...
>Aung Way – 19
> ပဉ္စမမြန်မာနိုင်ငံတော်တည်ထောင်ခန်း (၁၉) အောင်ဝေး ဒီဇင်ဘာ ၆၊ ၂၀၀၈ နဝတ ခေတ်တုန်းက ကလေးတွေပြောကြတဲ့စကားတခွန်း ပြန်အမှတ်ရမိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ‘ကလိန်စိငြမ်းဆင်၊ ငြိမ်ပိလမ်းစဉ်’ ဆိုတဲ့ စကားပါပဲ။ နဝတ စစ်အုပ်စုဟာ ဘယ်လောက်တောင် ကလိမ်စိငြမ်းဆင် လုပ်သလဲဆိုရင် အခု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ဧရာဝတီတိုင်း အနောက်ခြမ်းခရီးစဉ်ကိုသာ ကြည့်ပါတော့။ နဝတအဖွဲ့ကို တရားဝင်စာတင်ပြီး ထွက်လာတဲ့ ခရီးစဉ်တောင် မပြီးဆုံးသေးဘူး၊ NLD အဖွဲ့ဝင်တွေကို နဝတ စစ်တပ်က ဖမ်းပြီးထောင်ထဲ ထည့်ပစ်လိုက်ပြီ။ မအူပင်က NLD ရဲဘော်တွေ အရင်ဆုံးအဖမ်းခံရတယ်။ ပြီးတော့ ပုသိမ်မှာ ကျနော်တို့လူသိုက်အဖမ်းခံရတယ်။ ကျနော်တို့ ဆယ့်လေးငါးယောက်ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပင်လယ်ပြင်ဆင်းတဲ့နေ့ ညဘက်မှာ ဖမ်းတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပင်လယ်ပြင်က ပြန်ရောက်လာတဲ့နေ့ နေ့ခင်းကြောက်တောင်မှာ...
>Myo Kyaw Zin
> တရားရုံးထဲမှာ “ကမ္ဘာမကြေ” ထဆိုသူဇော်လင်းခိုင်ဒီဇင်ဘာ ၆၊ ၂၀၀၈ တရားရုံးထဲမှာ အမှုစစ်နေတုန်း တရားခံက နိုင်ငံတော်သီချင်း ထဆိုတယ်၊ တရားသူကြီးကို ကျောပေးပြီး မတ်တပ်ရပ်တယ်၊ ကန့်ကွက်တယ်။ တရားရုံးကို ဒီလို သပိတ်မှောက်တဲ့သူကတော့ မျိုးကျော်ဇင်ဖြစ်ပါတယ်။ သူ ဘာ့ကြောင့် ဒီလိုလုပ်ရတာလဲ။ သူနဲ့ သူ့မိတ်ဆွေတွေမှာ မကျေနပ်ချက်တွေရှိတယ်။၁။ တရားရုံးထုတ်ချိန်မှာ မိသားစုနဲ့ တွေ့ခွင့်မရဘူး။၂။ မိသားစုက အစား အသောက်တောင် ပေးခွင့်၊ ကျွေးမွေးခွင့်မရှိဘူး။၃။ အမှုစစ်နေတုန်း အရက်မူးနေတဲ့ စွမ်းအားရှင်တွေက တရားရုံးကို ၀ိုင်းထားတယ်။၄။ တရားရုံးဝင်ပေါက်တွေကိုလည်း သူတို့ကပိတ်ထားတယ်။၅။ ရှေ့နေနဲ့လည်း တွေ့ခွင့်မရဘူး။၆။ ဒါကြောင့် ရှေ့နေတွေက အမှုသည်ညွှန်ကြားချက် ရယူဖို့ မဖြစ်နိုင်ဘူး။၇။ တရားရုံးထဲမှာ ရဲအရာရှိဒေါ်အေးသီက လက်ကိုင်ဖုန်းပြောပြီး အမှုစစ်ဆေးနေတာကို နှောင့်ယှက်တယ်။ မျိုးကျော်ဇင်တို့ အမှုသည်တွေကိုယ်တိုင်က...
>Tin Moe’s bed
> တင်မိုး အိပ်ရာမောင်စွမ်းရည်ဒီဇင်ဘာ ၅၊ ၂၀၀၈ တနှစ်လည်ပြီတချီ ပြန်ရောက်၊ သူ့အိမ်ပေါက်မှာငါတယောက်ထဲ၊ သေတ္တာဆွဲလို့အားခဲမတ်တတ် ခြေစုံရပ်။ သူ့အိပ်ရာထက် …ငါ တက်အိပ်တော့ဆေးလိပ်နံ့တောင် မပြယ်သေး။ သူ့လွယ်အိတ်လည်း …လွယ်အိတ်သခင်၊ ရှိစဉ်နေရာနံရံမှာပဲ၊ ချိတ်မြဲ ချိတ်လျက်။ ရွှေတိဂုံကို …အာရုံမျက်မြင်၊ သူ ဖူးချင်လို့ခုတင်ခေါင်းရင်း၊ ပြတင်းဘောင်ထိပ်သူ ဆွဲချိတ်လျက်။ တယောအိုလည်း …ငိုမြည်မတ၊ ခန်းဝ ထောင့်ကွေးတေး မသီတော့၊ ကြိုးတွေ လျော့လျက်‘သွားတော့ သခင်’၊ နှုတ်ဆက်ချင် သို့။ သူ့အိပ်ရာထက် …ငါ တက်အိပ်တော့၊ အိပ်မက်ထဲမှာသူ ရောက်လာလျက်၊ “ထကွာ … ညီလေးဆေးလိပ်လဲ တို၊ နေလဲ ညိုပြီရွာကို ပြန်ကြရအောင်လေ” … တဲ့။ ငါ လန့်နိုးတော့ …မြင်ရိုး မြင်မြဲ၊ ဆေးလိပ်ခဲလျက်မှန်ဘောင်ထဲမှာ၊...
> ဦးသန့် ရာပြည့်တံဆိပ်ခေါင်း ကုလသမဂ္ဂမှ ထုတ်ဝေမည် မိုးမခအထောက်တော် ၀၀၅ဒီဇင်ဘာ ၅၊ ၂၀၀၈ လာမည့် ၂ဝဝ၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၂ ရက်နေ့တွင် အသက် ၁ဝဝ ပြည့်မည့် မြန်မာနိုင်ငံသား ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ဟောင်း ဦးသန့်၏ ရာပြည့်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် တံဆိပ်ခေါင်း ၃ မျိုး ကုလသမဂ္ဂက ထုတ်ဝေမည်ဟု သတင်း ထုတ်ပြန်ထားသည်။ ဦးသန့်၏ ရုပ်ပုံဖြင့် ထုတ်ဝေမည့် အမေရိကန် ဝ.၉၄ ဒေါ်လာ (၉၄ ပြား)တန်၊ ဆွစ်ဇာလန်ငွေကြေး ၁.၃ဝ ဆွစ်ဖရန့်စ်တန်၊ ဥရောပသမဂ္ဂ ငွေကြေး ၁.၁၅ ယူရို တန် တံဆိပ်ခေါင်းများကို ၂ဝဝ၉ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၆ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ဝေမည်ဟု ကုလသမဂ္ဂ...
>Thit Kaung Eain poem – 01
> သိုက်တူးသမားတယောက်အကြောင်း ပြန်လည်ပြောပြချက် သစ်ကောင်းအိမ်ဒီဇင်ဘာ ၄၊ ၂၀၀၈ ကြေးစားကလည်း ကြေးစားပီသတယ်ရန်သူကလည်း ရန်သူပီသတယ်လူကလည်း လူပီပီသသ။ မနက်ခင်းမှာ အရက်နာကျတယ်နေ့လယ်ခင်းမှာ စိတ်ဓာတ်ကျတယ်ညတွေမှာ ရင်ကွဲနာတွေကျတယ်။ တီတူးပြီးရောင်းလို့ ရတယ်ဆံပင်ဖြတ်ပြီးရောင်းလို့ရတယ်တိုင်းပြည်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးရောင်းလို့လည်းရတယ်။ ဘာမနာလိုစရာရှိလဲအင်ဒရူးဝိုင်းယက်က ကိုယ်ပိုင်ကျွန်းမှာ ပန်းချီဆွဲတယ်ငါက ကိုယ်ပိုင်အလွမ်းအဆွေးတွေနဲ့ ကဗျာရေးတယ်။ ဘာမနာလိုစရာရှိလဲမင်းနဲ့ငါလည်း ငွေလိုနေတယ်လူသန်းပေါင်း (၆၀) လည်း ငွေလိုနေတယ်အမေရိကန်အစိုးရမှာလည်း ငွေလိုနေတယ်။ ဘာမနာလိုစရာရှိလဲသုဘရာဇာက အလောင်းအလှပြင်တယ်ငါက စာအုပ်အလှပြင်တယ်သွေးဆာရင်ကောင်းကင်မော့ကြည့်တယ်။ ပန်းအလှစိုက်ပြီးယဉ်ကျေးချင်ယောင်ဆောင်သောလူသားကမ္ဘာမှာခွေးအလှမွေးပြီးယဉ်ကျေးချင်ယောင်ဆောင်သောလူသားကမ္ဘာမှာ။ ဘာမနာလိုစရာရှိလဲကိုယ်က တောနက်တယ်လောကက ငါးမန်းပေါတယ်အသား အသားချင်းမို့ မှားယွင်းမိခဲ့တယ်။ သစ်ကောင်းအိမ်Monday, July 16, 2007 No tags for this post. Related posts No related posts.
>U Win Tin and writings
> ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင်နှင့် စာနယ်ဇင်း ဆောင်းပါးများမောင်စွမ်းရည် ဒီဇင်ဘာ ၄၊ ၂၀၀၈ ဦးဝင်းတင် “စစ်ငရဲခန်း” က လွတ်လာပြီဆိုတော့ ပြည်တွင်းပြည်ပ မြန်မာဒီမိုကရေစီသမား ပြည်သူများအနေနဲ့ အထူးဝမ်းသာ အားတက်ကြပါတယ်။ နိုင်ငံတကာက စာနယ်ဇင်းသမားအပေါင်းကရော၊ လူ့အခွင့်အရေး လေးစားသူတွေရော၊ စစ်ဖိနပ်အောက်က မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ဘ၀ကို စာနာသူအပေါင်းကရော ၀မ်းသာအားရဖြစ်ကြပါတယ်။ ခုလို ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ကြသူတွေအနေနဲ့ ဦးဝင်းတင်ကို သိကြတာက ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံကာလမှာ ပြောင်မြောက်ရဲရင့်တဲ့ ခေါင်းဆောင်မှုနဲ့ ထောင်တွင်းတိုက်ပွဲတွေမှာ ရဲရင့်စွန့်စားတဲ့ ခေါင်းဆောင်မှုအပိုင်းတွေကို သိသင့်သလောက် သိကြလို့သာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဦးဝင်းတင်ရဲ့ ရဲရင့်ပြတ်သားတဲ့ သတင်းစာဆိုင်ရာ အယူအဆတွေ၊ အရေးအသားတွေကိုတော့ ဖတ်ဖူးကြားဖူးသူ နည်းမယ်ထင်ပါတယ်။ ဖတ်ဖူးသူများလည်း တစုတဝေးရဖို့ မလွယ်ပါဘူး။ ခု ဒီစာအုပ်ဟာ အဲဒီလိုအပ်ချက်ကို အတော်အတန် ဖြည့်ဆည်းပေးလိမ့်မယ်လို့...
>Zarganar & Ne Phone Latt honored as cyber dissident at RSF
> နယ်ခြားစည်းမထား သတင်းထောက်များက ကိုဇာဂနာနှင့် နေဘုန်းလတ်ကို ဂုဏ်ပြုဆုချီးမြှင့် မိုးမခ ဓာတ်ပုံသတင်း ဒီဇင်ဘာ ၄၊ ၂၀၀၈ စာနယ်ဇင်း လွတ်လပ်ခွင့်နှင့် လူ့အခွင့်အရေး လွတ်လပ်မှုတို့အတွက် ကိုယ်ကျိုးစွန့် ဆောင်ရွက်သူများကို ထိုအဖွဲ့က နှစ်စဉ် ရွေးချယ် ဆုချီးမြှင့်လေ့ရှိရာ ဒီနှစ်တွင် အင်တာနက် အတိုက်အခံ ဘလော့ဂါများအဖြစ် မြန်မာပြည်က စွယ်စုံရ အနုပညာရှင် ကိုဇာဂနာနှင့် ဘလော့ရေးသားသူ ကိုနေဘုန်းလတ်တို့ကို ရွေးချယ် ဂုဏ်ပြုလိုက်သည်ဟု သိရသည်။ ကိုဇာဂနာ၏ မိတ်ဆွေ လူရွှင်တော်၊ သရုပ်ဆောင်၊ ပန်းချီဆရာ၊ အနုပညာရှင်၊ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဟောင်း ပန်းချီ ထိန်လင်းက သူတို့ကိုယ်စား ဆုပေးပွဲကို တက်ရောက်ခဲ့သည်ကို တွေ့ရသည်။ No tags for this post. Related...
>Cartoon Win Pe – December Cartoon
> Cartoon Win Pe – December Cartoon December 4th 2008http://newerajournal.com/ No tags for this post. Related posts No related posts.
>Maung Yin Naing’s poem – 01
> ပေတံပိသော စာတလုံးမောင်ယဉ်နိုင် (မုံရွာ)ဒီဇင်ဘာ ၄၊ ၂၀၀၈ အဘိုး အဘေးတွေက …အိုးကလေး မြှုပ်ခဲ့သတဲ့ဟုတ်ကဲ့ … အရှည်ကြံသမို့အခြေခံ ဖွေရန်မြေလှန်ကာ ဆွထိုး …ရွှေငွေအကျန် ရနိုးနဲ့ရွပိုး ထသလို … ။ လမ်းရိုး … လမ်းရိုးကျမ်းအမျိုးပေါင်း များစွာနဲ့လမ်းဆိုးဟောင်း သွားလာယင်းစားစရာ ထမင်းဟင်းမေ့အချင်းချင်း တွေ့တော့သတင်း လွေ့လွေ့ဆို … ။ အစစ်ကြည့်ဆဲ …အသစ် မညှိရဲ့အဖြစ်မရှိဘဲ ထ ခုန်အလှစုံ မရှာတတ်လေသမျှစာဖတ်ရည် မ၀ တ၀နဲ့ကဗျာငတ် သေရတော့မလိုအခြေမလှပ ပြိုလဲ တချက်ချင်း … တချက်ချင်းအသက်မျှင်းမျှင်း ရှူကြည့်မဂ္ဂဇင်းအပူ မိတာပါ …အရှက်သတင်း လူမသိသာမီသူ … မချိရှာပြီထင်သတိမကွာ အစီစဉ်ဆွဲရင်ခွဲကာ ရှာဖွေစေရင်း၊ အဆုံးမတော့ကမ္ဘာမကြေ အပြုံးများနဲ့စာပေနှလုံးသားက …ကဗျာရှည်နှုန်းထားဖြင့်ကြုံးဝါးနေဆဲ။ ။...
>Zarganar to MyitKyiNar Prison, RSF Award and Burmese Artists’ Voice
> ဇာဂနာ မြစ်ကြီးနားထောင်၊ နယ်ခြားစည်းမထား သတင်းထောက်များ ဆုနဲ့ မြန်မာအနုပညာရှင်တွေရဲ့ အသံ မိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၂ နိုဝင်ဘာ ၄၊ ၂၀၀၈ ယမန်နေ့ညက ပြည်သူ့အချစ်တော် ကိုဇာဂနာကို မြစ်ကြီးနားထောင်၊ ဇော်သက်ထွေး – တောင်ကြီး၊ ကိုကတုံး – မြင်းခြံနှင့် သန့်စင်အောင် – ဖားအံထောင်များသို့ အသီးသီး ချုပ်နှောင်လိုက်သည်ဟု သိရသည်။ ယခုကဲ့သို့ မိသားစု သားချင်းများနှင့် လက်လှမ်းမမီသည့် ထောင်များကို ပြောင်းရွှေ့ချုပ်နှောင်လိုက်သည့်အတွက် အခက်အခဲမျိုးစုံနှင့် ပိုမိုရင်ဆိုင်စေရန် စစ်အစိုးရက ကောက်ကျစ်ယုတ်မာစွာ ဖန်တီးခြင်းဖြစ်ကြောင်း မိတ်ဆွေတဦးက ပြောလိုက်သည်။ ထိုအချိန်နှင့် တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပင် ပြင်သစ်အခြေစိုက် အာရ်အက်စ်အက်ဖ် – နယ်ခြားစည်းမထား သတင်းထောက်များအသင်းက ကိုဇာဂနာနှင့် နေဘုန်းလတ်တို့ကို ဂုဏ်ပြုဆုများ ချီးမြှင့်ရန်...
>3rd Dec 2008 – Wednesday Weekly Radio Program
> ၂ဝဝ၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၃ ရက် မိုးမခ ရေဒီယို အစီအစဉ် အာဆင်းနစ်ဓာတ် မြင့်မားနေသည့် မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသ၊ အမေရိကန် သန်းကောင်စာရင်းအတွက် ပြင်ဆင်နေသည့် မြန်မာများ၊ မာမာအေးဖောင်ဒေးရှင်း၏ ပထမဆုံး ရန်ပုံငွေပွဲ စသည့် မျက်မှောက်ရေးရာ သတင်းများ တင်မိုး၏ ကဗျာ – ပြည်တန်ကျောက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ မိန့်ခွန်း – ဆက်သွယ်ရေးစနစ် အရေးပါပုံ ဘီအီးဒီအောင်သိုက်၏ ‘ကြွေး’ ကက်ဆက်ဇာတ်လမ်း (ဇာတ်သိမ်းပိုင်း) (ကောလိပ်ဂျင်နေဝင်း၊ ဘီအီးဒီအောင်သိုက်၊ ရှုမဝ စမ်းစမ်းအေး နှင့် အနုပညာရှင်များစွာ သရုပ်ဆောင်ထားသည်) No tags for this post. Related posts No related posts.
>More Prisoners sent to remote prisons
> မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များကို ထောင်ပြောင်း၊ လူရွှင်တော် ကိုဇာဂနာကိုလည်း ညတွင်းချင်း ထောင်ရွှေ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတို့ကို ဒေသခံ ပြည်သူနှင့် ၀န်ထမ်းတို့ ၀ိုင်းဝန်း ကူညီစောင့်ရှောက်ကြရန် ဆရာတော်များက မေတ္တာရပ်ခံ မိုးမခ အထောက်တော် (ရန်ကုန်) ဒီဇင်ဘာ ၃၊ ၂၀၀၈ ယမန်နေ့က ပြည်တွင်းရှိ မျိူးဆက်သစ်လူငယ်များအစည်းအရုံးက ၎င်းတို့လူငယ်များကို ဝေးလံခေါင်ဖျားသော ထောင်များသို့ ပြောင်းရွှေ့ကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်သည်။ ပြည်သူအချစ်တော် ကိုဇာဂနာနှင့် မိတ်ဆွေများကိုလည်း ရန်ကုန်အင်းစိန်ထောင်က အခြားတနေရာသို့ ပြောင်းရွှေ့လိုက်ကြောင်း ကြားသိရသည်။ ဇေယျာသော်ကို ကော့သောင်း၊ အောင်ဇော်ဖြိုးကို တောင်ငူ၊ သီဟ၀င်းတင်ကို ညောင်ဦးထောင်များသို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြောင်း ဆိုသည်။ ထိုင်းအခြေစိုက် အေအေပီပီ စာရင်းအရ နိုဝင်ဘာလအတွင်း နိုင်ငံရေးအရ ဖမ်းဆီးခံထားရသူ ၃၀၀ နီးပါးကို ထောင်ဒဏ်များ...
> စစ်နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး – သင် ဘာရွေးမှာလဲ မောင်ရစ် ဒီဇင်ဘာ ၂၊ ၂၀၀၈ အိန္ဒိယမှာ အကြမ်းဖက်သမားတွေက လက်နက်မဲ့ပြည်သူတွေကို သွေးအေးအေးနဲ့ ပစ်သတ်နေချိန်၊ အိန္ဒိယလုံခြုံရေးတပ်သားတွေက အကြမ်းဖက်သမား လက်တဆုပ်စာကို ချောင်ပိတ်ပြီး အင်အားသုံး ဖမ်းဆီးနှိမ်နှင်းနေချိန်မှာ သင့်ကို မေးခွန်းတခုမေးမယ်။ စစ်နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး – သင် ဘာရွေးမှာလဲ။ သည်လိုမေးလာရင်တော့ အားလုံးက ငြိမ်းချမ်းရေးကို ရွေးလိမ့်မယ်။ စစ်ကို ဘယ်သူတွေ ရွေးမှာလဲ။ မြန်မာပြည်ရဲ့ ပြည်တွင်းစစ် နာတာရှည်အောက်မှာ ကျနော်တို့ သားတကွဲ၊ မယားတကွဲ၊ မိသားစုတွေ သေကွဲ ရှင်ကွဲ ကွဲလို့ ပြေးလွှားနေရချိန်၊ ထောင်ထဲ ရဲဘက်စခန်းထဲမှာ သားချင်းတွေ ဒုက္ခပင်လယ်ဝေနေချိန်မှာ၊ နယ်စပ်က ကျေးရွာတွေ စစ်မီးတွေ ဟုန်းဟုန်းတောက်လို့...
> အပြောင်းအလဲများသည့် ထိုင်းနိုင်ငံမြင်ကွင်းဒီဇင်ဘာ ၂၊ ၂၀၀၈ အစိုးရအဖွဲ့ပြုတ်ကျသည့်သတင်းကြောင့် အောင်ပွဲခံ ပျော်ရွှင်နေသော ဆန္ဒပြသူများ။ သိမ်းပိုက်ထားသည့် လေဆိပ်မှ ဆုတ်ခွာပေးမည်ဟု ၎င်းတို့က ကြေညာလိုက်သည်။ (အပေါ်ပုံ) ယနေ့နံနက်ပိုင်းက ဘန်ကောက်မြို့တော်တွင် တပ်မတော်သားတို့၏ သစ္စာခံ၊ အလေးပြုခြင်းကို ခံယူနေသော ထိုင်းနိုင်ငံ ဘုရင် ဘူမိဘော အဒူလ်ယာ ဒေ့ခ်ျ (၈၁နှစ်)။နှစ်စဉ် ဒီဇင်ဘာလဆန်းတွင် ပြုလုပ်မြဲဖြစ်သော စစ်ရေးပြအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ခဲ့သော ဘုရင်က မိန့်ခွန်းပြောရာတွင် လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေနှင့်ပတ်သက်၍ ထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ခြင်းမရှိဟု www.chinapost.com.tw တွင် ရေးသားထားသည်။ ကမ္ဘာ့နန်းသက်အရှည်ဆုံးဘုရင်ဖြစ်သည့် ထိုင်းဘုရင်သည် ထိုင်းနိုင်ငံ လူထု၊ စစ်တပ်၊ အစိုးရတို့၏ လေးစားချစ်ခင်ခြင်းကို ခံရသူဖြစ်သည်။ ဆန္ဒပြသူများ ဆုတ်ခွာသွားသည့် ၀န်ကြီးချုပ်ရုံးဝင်းအတွင်းမှ ပန်ကာများကို ရှင်းလင်းသိမ်းဆည်းနေသော ၀န်ထမ်းတဦး။ သုဝဏ္ဏဘူမိလေဆိပ်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသော...
> မြန်မာပြည်မှာ မနေ့ညက ကြယ်နဲ့လ သာပုံ ထူးဆန်း မိုးမခ အထောက်တော် (ရန်ကုန်) ဒီဇင်ဘာ ၂၊ ၂၀၀၈ ယမန်နေ့ည ရန်ကုန်အချိန် ၆ နာရီခန့်က ကောင်းကင်ယံတွင် လခြမ်းကွေးက ပြုံးနေသည့် နှုတ်ခမ်းဟန်၊ သောကြာကြယ်ကက လက်ဝဲနှင့် ကြာသာပတေးကြယ်က လက်ယာမျက်လုံးများသဖွယ် ကောင်းကင်က ငုံ့ကြည့်နေသည့် ပုံစံ ဖြစ်နေသဖြင့် မြန်မာတို့ အိမ်ပေါ် လမ်းမများပေါ်ထွက်ကြည့်ကြပြီး အံ့သြ ငေးမောကြသည် ဆိုသည်။ တချို့က ပြုံးနေသည့် မျက်နှာသဏ္ဍာနှင့် ကောင်းကင်ကို ကြည့်ပြီး ထိတ်လန့်ကြသလို တချို့က စိတ်ချမ်းသာမိကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသည်။ “ အာရှတိုက်က နိုင်ငံကြီးတွေမှာ အပူမီးတွေ တိုက်နေတာ၊ ကပ်ဆိုက်နေတာကြောင့် ဒီ ၂၀၀၈ တခုလုံးကို ပြည်သူတွေ ပင်ပန်းဆင်းရဲစွာ...
> လူထုဒေါ်အမာ ၉၃ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ အမှတ်တရ ဂုဏ်ပြုစာ ကဗျာများ နှင်းဆီလွင်ပြင်စာပေအဖွဲ့က ပြည်ပတွင် အခမဲ့ အင်တာနက်စာအုပ်အဖြစ်ထုတ်ဝေ မိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၃ ဒီဇင်ဘာ ၁၊ ၂၀၀၈ ပြည်ပရောက် စာပေမိတ်ဆွေအဖွဲ့တခုဖြစ်တဲ့ နှင်းဆီလွင်ပြင်က ကွယ်လွန်သူ ဆရာမကြီး လူထုဒေါ်အမာ ၉၃ နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ဂုဏ်ပြုတဲ့ စာ ကဗျာများ စုစည်းထုတ်ဝေလိုက်ပါတယ်။ အင်တာနက်ခေတ်ဖြစ်သည့် အားလျှော်စွာ ၎င်းစာအုပ်ကို အင်တာနက်စာအုပ်အဖြစ့် အီးမေးတွေကတဆင့် အခမဲ့ ဖြန့်ချိလိုက်ပါတယ်။ ပြည်ပရောက် နေရာဒေသအသီးသီးရှိ မြန်မာစာပေချစ်သူများက စာပေဟောပြောပွဲတွေ၊ ဆွမ်းကျွေးပွဲတွေနဲ့ လူထုဒေါ်အမာမွေးနေ့ကို အမှတ်တရပြုကြကြောင်းကိုလည်း သိရှိရပါတယ်။ ဆရာမကြီးဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၈ ဧပြီလမှာ ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာပြည် ဧရာဝတီတိုင်းကို ဖျက်ဆီးချေမွပစ်လိုက်တဲ့...
> အမေ လူထုဒေါ်အမာ ၉၃ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ မန္တလေးမှာ စည်ကားစွာ ကျင်းပ မိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၃ ဒီဇင်ဘာ ၁၊ ၂၀၀၈ မန္တလေးမြို့နဲ့ မြန်မာပြည်ရဲ့ ထင်ရှားတဲ့ ကျက်သရေဆောင် အမျိုးသားစာဆို၊ စာရေးဆရာ၊ သတင်းစာ ဆရာမကြီး အမေလူထု ဒေါ်အမာရဲ့ ၉၃ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့အခမ်းအနားကို နိုဝင်ဘာ ၂၉ နံက်ပိုင်းက မန္တလေးမြို့ စီဗွီလိုင်းရပ်၊ ၆၈ လမ်း၊ ၃၂ နှင့် ၃၃ လမ်းကြားမှာ ရှိတဲ့ မဟာဝိဇိတာရုံ ကျောင်းတိုက်က သာသနဟိတကာရီ ဓမ္မဗိမာန်မှာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ဆရာတော် သံဃာတော်များကို ဆွမ်းကပ်ခဲ့ပြီး အနယ်နယ် အရပ်ရပ်က ကြွရောက်လာကြတဲ့ စာပေအနုပညာရှင်တွေ၊ ဧည့်သည်တွေကို နံက်စာနဲ့...
> မိုးမခရဲ့ ရေဒီယိုချစ်သူများ ဆစ်ဒနီ နိုဝင်ဘာ ၃၀၊ ၂၀၀၈ သီချင်းဆို၍ ငိုရသည် – ခင်ညွန့်ရီ သာသနာ့ဥသျှောင်ဥက္ကဋ္ဌ ပီနန်ဆရာတော်ရဲ့ တရား/ မတရားကောက်နှုတ်ချက်-Burma သတင်းပဒေသာ၊ သီချင်းပဒေသာ ပန်တျာတေး/ကြော်ငြာအရေး သူလိုလူစားရှာမှရှား – ထောင်တွင်းကာလများ (ဇင်လင်းရေးတဲ့ဦးဝင်းတင်-မိုးမခ) တင်မိုးရဲ့လွယ်အိတ်ကဗျာ-မောင်စွမ်းရည် ရခိုင်ဒီချုပ်အဖွဲ့ နာယက ပဏ္ဍိတ်ဆရာကြီး ဦးဦးသာထွန်း (၉၁)နှစ်မွေးနေ့အမှတ်တရ (နိုင်နိုင်-စစ်တွေ) ဇာဂနာသီချင်း/ဇာဂနာဆုရသတင်း စီစဉ်သူ-ဦးပန်တျာ၊ နှင်းမြတ်ခိုင် (လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ ဘာသာရေး အခမဲ့ ကြော်ငြာနိုင်ပါပြီ) ဆက်သွယ်ရန် Email – upantra@optusnet.com.au No tags for this post. Related posts No related posts.
> နိုဝင်ဘာလ စာကိုး စကားကိုး ဒီဇင်ဘာ ၁၊ ၂၀၀၈ ကျွန်တော် အမေရိကားက ပြန်လာတော့ ရပ်ကွက်ထဲမှာ အသိ အဒေါ်ကြီး တစ်ယောက်က “ဟဲ့..နင် အခုမှ နိုင်ငံခြားက ပြန်လာတယ်ဆို။ AIDS စစ်ပြီးသွားပြီးလား။ ဟိုဘက်လမ်းက သီဟတစ်ယောက်တော့ မလေးရှားက ပြန်လာတာ ဆေးစွဲပြီး AIDS ကူးလာလို့” တဲ့။ ကျွန်တော် ဘာပြန်ပြောလို ပြောရမှန်း မသိအောင် ဖြစ်သွားတယ်။ သူတို့ အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာက ဒီလို လူတွေများတော့ ကျွန်တော်ကို ဒီလို လာမေးတာ သူ့အတွက်တော့ မဆန်းပါဘူး။ ကျွန်တော်ကလည်း ဒီလို ရပ်ကွက်ထဲမှာ နေတာကိုး။ ကျွန်တော် ကျွန်မတို့သည်၊ http://wesheme.blogspot.com/2008/11/first-impression-on-foreign-countries.html နိုဝင်ဘာ ၁ ဒီလိုနဲ့ ဂျပန်လေဆိပ်ကိုရောက်ပါရော… မြန်မာပတ်စပိုစ့်ဆိုတော့...
> အစဉ်ခေတ်မှီနေသော ငါးရာ့ငါးဆယ် ခင်မျိုးချစ် နိုဝင်ဘာ ၃၀၊ ၂၀၀၈ ငါးရာ့ငါးဆယ်နိပါတ်တော် ၀တ္ထုများကို ကလေးဘ၀ကမိဘဘိုးဘွားခွင်ထက်မှာ ကြားနာခဲ့ကြရတယ်။ စေတီပုထိုးများမှာပန်းချီပန်းပုများနှင့် သရုပ်ဖော်ထားတာတွေကို မြင်ခဲ့ရတယ်။ ကလေးဘ၀တွင် အငြီးပြေသဘောလောက်သာမက လူ့ဘ၀တလျှောက်လုံး အသုံးဝင်သည့် အတွေးအခေါ် သဘောတရားတွေပါနေတာကိုလည်း ကြာလေ ကြာလေ သဘောပေါက်မိပါတယ်။ ၅၅၀နိပါတ်တော် ဦးဆုံးအစဖြစ်တဲ့ ဧကနိပါတ်ရဲ့ ပထမဇာတ်ဝတ္ထုကို တင်ပြလိုပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းကတော့ မဆန်းလှပါဘူး။ လှည်းကုန်သည် ၅၀၀ အစု နှစ်စုတို့ ကန္တာရခရီး ဖြတ်ပြီး ကုန်ရောင်းကုန်ဝယ် သွားကြတဲ့ အကြောင်းပါဘဲ။ အုပ်စု နှစ်စု ဘယ်သူက အလျင်ရှေ့က သွားမလဲဆိုတာ ညှိကြတယ်။ ပညာရှိ လှည်းကုန်သည်က နောက်မှသွားဘို့ ဆုံးဖြတ်တယ်။ လူမိုက် လှည်းကုန်သည်က ရှေ့ကသွားမယ်လို့ ဆိုတယ်။...
Page 844 of 901«1...842843844845846...901»
>Ashin Nanika - Excused Lives